चुनावमा हार : जनतालाई कर थोपरेर दुःख दिएको परिणाम
- सन्जीब खड्का
सोमबार १६, मङि्सर २०७६
कार्यालयमा सेवाग्राही आउदा खुसी भएर आउँछ !
फर्कदा आक्रोशित भएर फर्कन्छ !
सोच्छु किन होला ?
कर पनि यस्तो लगाएको छ बढाएको छ कि ८००% देखि ९००% सम्म छ ! दस्तुर पनि यस्तो लगाएको छ कि सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने नाराकै ठिक बिपरित छ !
हजुर मेरो आर्थिक अबस्था कमजोर छ घरमा खाने छैन, नि:शुल्क उपचार गर्न सिफारिस पाउ भन्दा ४५० तिर्नुपर्छ !
हजुर मेरो श्रीमान बित्नु भयो छोराछोरी लाई पालन पोषण गर्ने कमाई गर्ने घरमा कोहि छैन कुनै स्कुलमा नि:शुल्क पठन पाठन गराउन सिफारिस पाउ भन्दा ४५० तिर्नुपर्छ !
मेरो घर आगलागी भएर सर्बश्व भयो केही राहत पाइन्छ कि हजुर भनेर सिफारिस लिन ४५० तिर्नुपर्छ !
मेरो खेतिमा लगाएको बाली फौजी किराले सखाप पार्यो बीउ किनेको ऋण तिर्न नसक्ने भैयो केही राहत पाइन्छ कि सिफारिस दिनु न भन्दा ४५० तिर्नुपर्छ !
मरितरी १२ वटा ग्लास,१ वटा तपेस र दिउरे अनि १०/१५ वटा प्लेट र चम्चा राखेर ३किलो चना, २ किलो मटर, २ किलो आलु अनि ४ लिटर दूध किनेर ब्यापार गर्नेलाई १० लाखसम्मको ब्यापारी सरह कर तिर्ने मात्रै हैन कर तिरेपछि प्रामाण पत्रको मात्रै फाल्टै ५०० तिर्नुपर्छ !
टाढाको भनिने सरकारले नगरिकता नि:शुल्क बनाई दिन्छ तर आफैले चुनेको नजिकको सरकारलाई ५० त तिर्नै पर्थियो अब त अर्को सिफारिस बनाएको ४५० तिर्नु पर्छ !
नजिकको सरकार भएपछी त आफ्नै गाउमा वार्डमा एक जना प्राबिधिक राखी दिएर घर नक्साको सबै काम वार्डबाटै हुने ब्यब्स्था मिलाउनुको सटटा सस्तोमा घर नक्सा कार्यलयले नै बनाईदिने पहल गर्नुको सटटा मिथ्या आरोप लगाएर निरंकुश शासकको व्यबहार गरिन्छ !
सबै कर्मचारीलाई समान व्यबहार गर्नुपर्नेमा चाकरी कर्मचारिको इसारामा काम गरिन्छ र उसैलाई प्रोत्साहन गरिन्छ !
शासक बनाउन जस्ले निस्वार्थ सहयोग गर्छ उसैको बदनाम गरिन्छ हुर्मत लिइन्छ झुठो आरोप लगाइन्छ अनि आरोप प्रमाणित गरिन्दैन !
अनि कसरी इमान्दार कार्यकर्ता र नागरिकले सहयोग गर्छ ? अनि त्यो कार्यकर्ता र जनताले आवाज सहि मौकामा नराखेर कहिले राख्छ त ? अहिले त्यस्तै त्यस्तै आवाज बिहिनहरुको आक्रोश र त्यस्ता हुर्मत लिएकाहरुको आवाज नसुनेको परिणाम हो यो ! निश्चित समयको लागि मात्रै तिमी शासक हौ ! तिम्रो त्यो अहंकार निश्चित समयको लागि मात्रै हो ! जस्लाई तिमी दु:ख दिन्छौ त्यस्ले मौकामा तिम्रो पनि यस्तै हुर्मत लिन्छ !!!
चेतना भया !!!!